သင်မသေဆုံးခင် သင့်ရဲ့ သားသမီးတွေကိုမပြောမဖြစ်ပြောပေးခဲ့သင့်သောစကား(၄)ခွန်း
Home Lotaya သင်မသေဆုံးခင် သင့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို မပြောမဖြစ် ပြောပေးခဲ့သင့်သော စကား (၄) ခွန်း
သင်မသေဆုံးခင် သင့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို မပြောမဖြစ် ပြောပေးခဲ့သင့်သော စကား (၄) ခွန်း
ကျွန်မတို့တွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဝမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ပြီးပြည့်စုံနေပါစေ ကျွန်မတို့မိဘတွေဆီကနေ ကြားချင်တဲ့အရာတွေရှိကြပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ကြားချင်တဲ့စကားတွေပေါ့။ ကျွန်မတို့ဟာ မိဘတွေဆီကနေ ဒီစကားတွေကို ကြားရဖို့ ကလေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆယ်ကျာ်သက်အရွယ်ကို ရောက်လာလာ၊ လူငယ် နောက်ဆုံး လူကြီး..စသဖြင့် အသက်အရွယ်တွေဟာ ကြီးသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို ပြောကို ပြောသင့်တဲ့ စကားလုံးတွေမို့ပါ။
ကျွန်မတို့ချစ်တဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အတူရှိနေရတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးထက် ဘဝမှာ ပိုပြီး တန်ဖိုးထားစရာဆိုတာ ဘယ်အရာမှမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ ရှင်သန်မှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေဆီကို ဦးတည်စေပါတယ်။ မိဘဖြစ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်အရာနဲ့မှ မတူပါဘူး။ ဘဝတစ်ခုကို ပေးလိုက်ရတယ်၊ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစေရုံံသာမကဘဲ ပိုနက်ရှိုင်းတဲ့ အဆင့်အသစ်တစ်ခုအထိ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မို့ ဒီစကားလုံးလေးကို သင့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို ပြောခဲ့ပါ။ သင့်ဘဝမှာ သူတို့ကြောင့် ဘယ်လောက်အထိပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ကို အသိပေးပါ။
၂။ အမေ/အဖေ သား/သမီးကို ချစ်တယ်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ လုံခြုံဖို့၊ လက်ခံမှုတွေကို ခံစားရဖို့နှင့် တစ်ခြားလူတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ဖို့ အချစ်ခံရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဲ့ဒီ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာက မိဘတွေ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေဆီကရတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးဆိုရင် တစ်ဘဝစာ လုံလောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ သွေးသားဟာ လောကကြီးရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့၊ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ သားသမီးတွေကို ချစ်တယ်လို့ ပြောပါ။
၃။ အမေ/အဖေ တောင်းပန်ပါတယ်/ စိတ်မကောင်းပါဘူး
ဘယ်သူကမှ မပြည့်စုံပါဘူး။ ‘စိတ်မကောင်းပါဘူး’ လို့ ပြောနိုင်ခြင်းက ဆက်ဆံရေးမှာ လုံခြုံမှုနှောင်ကြိုးနှင့် ခိုင်မြဲသော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ တံတားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေ အမှားတစ်ခုခုကို လုပ်မိတဲ့အခါ မိဘတွေက တောင်းပန်စေချင်ကြပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အရည်အချင်းတွေက ထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါ မိဘတွေဟာ အကြီးအကျယ်ဆူပူပြကြပါတယ်။ ဒါဆိုလူကြီးတွေကရော..?
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေ တောင်းပန်တဲ့အခါ ကလေးတွေအတွက် လူသားဆန်ခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာတွေကို သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နက်ရှိုင်းတဲ့ ယုံကြည်မှုကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
၄။ သား/သမီးက မယုံံနိုင်လောက်အောင် ထူးခြားသူတစ်ယောက်
ကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေနှင့် ကိုယ့်ရဲ့ ထူးခြားမှုတွေကို လူတွေသတိထားမိမယ်ဆိုရင် သင်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? ဒါဟာ ကြီးမားသော ကတိသစ္စာ၊ ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသူ ပြီးတော့ သင့်အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာလိုင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးတွေကို ချီးမွမ်းပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ချစ်ခြင်း..စတဲ့ ဘဝရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်တင်းရပါမယ်။
Previous articleသံယောဇဉ်နဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ
Next articleမေမေတို့ရဲ့ ၂နှစ်အရွယ်ကလေးကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ အကြံဉာဏ် (၄)ခု